As of Fri, 03 Apr, 2020 00:00
वैदेशिक रोजगारीमा महिलाका चुनौती
कुनै बेला चुलो र चौकामा सीमित रहने महिलाहरूको श्रम र सीप अहिले विश्ववजारमा बिक्न थालेको छ । चौघेरामा बाँधिएका नारीहरू अहिले विश्वभरि नै आफ्नो श्रम र सीप खर्चन पुगेका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरू घरभित्रमात्र सीमित छैनन् । अहिले विश्वका थुप्रै देशमा पुगेर अर्थतन्त्र मजबुत पार्नका लागि प्रयासरत छन् । आफ्ना परिवारको भविष्यको चिन्ताले पनि उनीहरूको मन बढी कठोर र संघर्षशील बनेको छ । भिन्न संस्कृति, भाषा र परिवेशमा पुगेर पनि नेपाली महिलाले आफ्नो श्रम र सीपलाई विदेशी भूमिमा खर्चिरहेका छन् । त्यसैले दिन–प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
नेपाल एक मिश्रित हावापानी पाइने देश हो । नेपाल भौगोलिक विविधताले युक्त देश भएकाले यहाँ विभिन्न किसिमको हावापानी पाइन्छ । विषेशतः असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ र फागुन महिनामा दिन छोटो हुने र रात लामो हुने गर्छ । ढिलो सूर्याेदय हुने र चाँडो सूर्यास्त हुने भएकाले ती महिनामा बढी जाडो हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बालबच्चा, वृद्धवृद्धा अनि सुत्केरी महिला, गर्भावस्थामा रहेका महिला सबैको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस कुनै नयाँ विषय होइन । १ सय ४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै २०१३ सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै आर्थिक विकासको बहसले थप तीव्रता पाउँदै आयो । नेपालसँगै विकास र समृद्धिको सुरुवात गरेका भारत, चीन, कोरियालगायतका देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढेका छन् । तर, नेपाल भने आर्र्थिक विकासको नारामा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ ।
लगानी भन्नासाथ आर्थिक क्षेत्रमा गरिने लगानी भनेर बुझ्ने गरिन्छ । कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार आदि विविध क्षेत्रमा गर्नुपर्ने र गरिने लगानीका बारेमा निकै महŒवका साथ चर्चा हुने गर्छन् । उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने हुँदा सीधै अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अत्यन्तै महŒवका साथ हेर्ने गरिन्छ । यसो भनेर सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई उपेक्षा गर्नुचाहिँ उचित होइन है । सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीले पनि अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरेकै हुन्छ । अतः सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई उत्तिकै महŒवका साथ हेरिनु आवश्यक छ ।
सन् २००२ मा नयाँ जीवाणुको प्रकोप देखा पर्दा चीनले जंगलीसमेतका जीवित वा मृत जनावरहरू बजारमा खुलेआम बेचबिखन गर्न रोक लगायो । यही जीवाणुका कारण प्राणघातक सार्स फैलिएको त्यसबखत अनुमान गरिएको थियो । अहिले सार्ससँग मिल्दोजुल्दो कोरोना भाइरसले चीनलाई सताएको छ र रोगको मुख्य उत्पत्ति तिनै जीवजन्तुमाथि आशंका गरिएको छ ।
मेरा एक जना मित्र सेयर लगानीकर्ता विष्णुहरि श्रेष्ठले केही वर्ष पहिले एउटा जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन हँुदा प्राथमिक सेयर खरिदका लागि आवेदन गर्न घामपानी, भोकप्यास नभनी चार घण्टा लाइनमा बसेर आवेदन दिएको रु. १ सय पर्ने सेयरको अहिले दोस्रो बजारमा रु. ६० को हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा धेरैजसो हाइड्रोपावरहरूको सेयरको हालत यस्तै छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । विगतमा रु. २५ सयभन्दा बढी पुगेको हाइड्रोपावरको सेयरको मूल्य अहिले रु. ३–४ सयमा पाइने गरेको छ । पछिल्लो समयमा हाइड्रोपावर कम्पनीको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूमात्र नभई प्राथमिक सेयरका लगानीकर्ताहरूसमेत विचल्लीमा छन् । पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा घट्दै गएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
कर सबै देशवासीले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरो हो । भनिन्छ, कर र मृत्यु अवश्यम्भावी कुरा हुन् । राज्यमा थोरै आय हुनेले थोरै र धेरै आय हुनेले धेरै कर तिर्ने व्यवस्था भयो भने न्यायसंगत मानिन्छ । देश विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले समय समयमा करका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने गर्छ भने यसको दायरालाई पनि फराकिलो पार्छ । करको दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमार्फत विदेशमा मुद्रण भई आयात भएका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको हुबेई प्रान्तमा आइतबार एकै दिन १ सय जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यद्यपि यो भाइरसका कारण चीनभर आइतबार १ सय ५ जनाको मृत्यु भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले सोमबार जनाएका छन् । त्यसैगरी आइतबार चीनभरि २ हजार ४८ जना संक्रमित भएको समाचारमा जनाइएको छ । संक्रमितहरूको यो संख्या चीनको ३९ प्रान्तमा रहेको बताइएको छ । गत डिसेम्बरबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हुबेई प्रान्तमा मात्र ५८ हजार १ सय ८२ जनालाई कोराना भाइरस संक्रमण भएको आइतबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
हामीले यसअघिको श्रृंखलामा वनजंगलको धनी देशमा वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको विडम्बनापूर्ण प्रसंग उल्लेख गरेका थियौं । यसपटक त्यो बाहिरिएको ६ अर्ब कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएका छौं । नेपालको वन नीति नै काठ आयात गर्नुपर्ने मुख्य आधार रहेको पाइएको छ । सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वन नीति यति कठोर बनायो कि नागरिकले निजी वनका रूखसमेत आफूखुसी काट्न नपाउने भए । सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिस लिएर मात्र निजी वनका काठ काट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले वन जोगाउने नीति त अघि सा-यो, तर वनभित्र रहेका बूढा रूखहरू झिकेर नयाँ बिरुवा रोप्दै हुर्काउने नीति बनाउँदै बनाएन, जसले गर्दा स्वदेशका रूख वनमै कुहिए ।
यो पृष्ठभूमिमा यही भूगोलमा ‘आर्यहरूकै एउटा बगाल (दरद र नुरिस्तानी) इपू पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि तेह्रौँ शताब्दीबीचमा यस प्रान्तमा खोलै खोला उक्लिसकेका अनेक पुरातात्विक प्रमाण (किथ, १९१३ इ., ‘द व्रात्याज’, टुची, १९४० इ., टिबेटन पिल्ग्रिम्स इन स्वात भ्याली, महेश्वर जोशी, २०१७ इ., हर्स इन रक ड्रइङ्स इन स्पिपत) पाइएका छन्’ भनेर प्राध्यापक माधव प्रसाद पोखरेल लेख्छन् । अर्कातिर बैकाल तालको क्षेत्रतिरबाट सिल्क रोड हुँदै मंगोलियनहरू यो भूगोलमा छिरेको देखिन्छ । त्यसरी नै अफगानिस्तान हुँदै आर्य र किराँत छिरेको इमान सी चेम्जोङ लेख्छन् । खुल्ला सिमानाका कारण भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट नेपालको तराईमा छिरेका जातजातिबारे विद्या वीर कंसकार लेख्छन् । यही पाटो केलाउँदा तिब्बतबाट छिर्ने अर्कोथरी देखिन्छ ।
सरकारको दुई वर्ष र दिल्ली चुनाव
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भयो । झन्डै दुईतिहाई नजिक रहेको सरकारले समाजवादी पार्टीसँग मिलेर दुईतिहाइ बनाई आरामपूर्वक सरकार सञ्चालन ग¥यो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका करिब–करिब शान्तजस्तै थियो । एकाध विषयभन्दा बाहेक अन्य धेरै विषयमा प्रतिपक्षी मौन नै बस्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि सशक्त भूमिका देखिएन । प्रतिपक्षी पार्टीहरू आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिरहे । भारी बहुमतको सरकारलाई विकासको एजेन्डा पूरा गर्न सकिएन भन्ने बहानाहरू केही पनि बाँकी थिएनन् ।
सामाजिक बहिष्कार र समावेशीकरणको अवधारणा औद्योगिक विश्वको सामाजिक बनावटको द्रुत उथलपुथल, व्यक्तित्ववादको उदय र समानता पछाडि रहेको बजार शक्तिले गर्दा मध्य सन् १९७० मा फ्रान्सबाट नीतिगत रूपमा प्रमुख रूपमा चित्रण हुन गयो । गरिबी हटाउने र मुख्य सामाजिक नीति तय गर्ने सोचेर यो अवधारणा युरोपमा अभ्यासमा आयो । यसभित्र बजारका शक्तिहरूले राजनीतिक–आर्थिक रूपले सामाजिक जीवनका, पारिवारिक सम्बन्ध र संरचनाका प्रत्येक मोडमा रूपान्तरणको अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ ।
गृह मन्त्रालय मातहत रहेको अध्यागमन विभागले हालै निकालेको एक तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ को जनवरी महिनाको तुलनामा सन् २०२० को पहिलो महिनामा अर्थात् जनवरी महिनामा नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकको संख्या केही घटेको देखिएको छ । अध्यागमन विभागको पछिल्लो तथ्यांकलाई उद्यृत गर्दै एक आर्थिक दैनिकले समाचारमा लेखेअनुसार सन् २०१९ को जनवरी महिनामा ८१ हजार दुई सय ७३ जना विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए भने, सन् २०२० को पहिलो महिना अर्थात् जनवरी महिनामा ७९ हजार ६ सय ८६ जना विदेशी पर्यटकले मात्रै नेपालको भ्रमण गरेका छन् । यसरी संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने, सन् २०१९ को पहिलो महिनाको तुलनामा सन् २०२० पहिलो महिनामा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या लगभग १८ सयको संख्याले कमी आएको देखिन्छ ।